Kedu ka mbufịt si malite | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ka mbufịt si malite
Tsunami na Indonesia, na 2004
Nnukwu ebili mmiri, ndị na-apụta mgbe ụfọdụ mgbe ala ọma jijiji na-agbawa obi, na-adị ka ihe si na fim apocalyptic. Ihe igwe ihe omimi a na-ebute mmebi ukwu n'ụsọ oké osimiri, na-ewere ihe niile n'ụzọ ya.
Taa, anyị ga-ahụ ka mbufịt si malite, na mba ebe ha kacha nọrọ n’ihe ize ndụ nke ịbụ ntọala “ahọpụtara” maka ebili mmiri nke ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, dịka a maara ha na Japan.
Tsunamis bụ oke ebili mmiri nke nwere ike n'etiti 7 na 33 mita Ogologo. Mgbe ụfọdụ, ha na-ebilite mgbe ala ọma jijiji gasịrị, ma ọ bụ ala ọma jijiji ma ọ bụ ugwu mgbawa mere. Mgbe ala ọma jijiji na-asọda n'okpuru oke osimiri, mmiri dị n'elu gbagoro ọtụtụ mita, na-agagharị na ụsọ oké osimiri ma na-emetụta ala ahụ.
Ndị a bụ ihe ịtụnanya na, n'ihi mbibi ha, ndị sayensị nwere olile anya inwe ike igbochi ha tupu oge eruo, n'ihi na taa ọ na-esiri ha ike. N'agbanyeghị nke ahụ, n'ihi ọganihu ngwa ngwa nke teknụzụ, ha na-abịarukwu nso na iru ya. Ha na-eji ya seismographs, nke na-edekọ ọdịdị dị iche iche (ike na oge, n’etiti ndị ọzọ) nke ala ọma jijiji nke ala ọma jijiji rụpụtara; yana oghere igwe na-egosi onyonyo nke oke osimiri.
Image: National Oceanic na ikuku nchịkwa (NOAA)
Mba ebe oke tsunamis sitere bụ ndị dị na akpọrọ Pacific Ring of Fire, ya bụ, na: Japan, Australia o Hawaii. Na mba ndị dị ka nke anyị, Spain, ihe egwu dị obere, agbanyeghị, anyị anaghị agụpụ ihe egwu a: na Nọvemba 1, 1755 Cádiz na Huelva tara ahụhụ nke oke ebili mmiri nke hapụrụ 1240 nwụrụ, mgbe ala ọma jijiji mere n’etiti 8 na 3 na Richter n'ọtụtụ kụrụ Lisbon. Ọ bụ eziokwu na ihe karịrị narị afọ abụọ agafeela kemgbe ihe a jọgburu onwe ya, mana n'ihi nsonaazụ ọjọọ nke tsunami, ndị sayensị nwere olile anya inwe njikere usoro ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ka mbufịt si malite
mmuo maryel dijo
Ọ masịrị m, mana m na-atụ uche maka etu ha siri bido ihe ọ bụla ha na-ekwu na ebe ndị mere eme anaghị eme ka m kwenye nke ukwuu mana ọ nyeere m aka daalụ nke ukwuu
Zaghachi nyem moyel
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere amuma mmiri
Oge oyi dị egwu karịa ihu igwe ọkụ